भारतसम्मै आइपुग्यो बितण्डा मच्चाउने मनसुन, नेपालमा पनि एस्तो प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी ! – Khabar28media
भारतसम्मै आइपुग्यो बितण्डा मच्चाउने मनसुन, नेपालमा पनि एस्तो प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी !
June 4, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
नेपाल भित्रिने मनसुन (वर्षा याम सुरु गराउने मौसमी प्रणाली) भारतको केरला आइपुगेको मौसमविद्ले बताएका छन्। अनुमान गरेभन्दा मनसुन तीन दिन ढिला मनसुन केरला पुगेको विभागले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार बंगालको खाडीमा विकसित मनसुन बिहीबार बेलुका केरला आइपुगेको भारतीय मौसमविद्ले जानकारी दिएका हुन्।
Previous Article काठमाडौं वासीहरुका लागि भर्खर आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना, तुरुन्त पढ्नुहोस् !!
Next Article आज नेपालमा अपडेट यस्तो : डरलाग्दो संकेत देखेपछी सरकारले सबै अस्पताललाई दियो यस्तो निर्देशन (बिज्ञप्ति सहित)